Obama Care oo Halis Ugu Jira in la Baabi'iyo
Madaxweynaha Mareykanka Barak Obama ayaa shaley booqdey Capital Hill si uu ula kulmo xildhibaanada Aqalka Sare iyo kan Hoose ee xisbiga dimuquraadiga oo uu kala hadlayey si ay ubadbaadiyey sharciga uu katagey ee Caymiska Caafimaadka, loona yaqaan Obama Care.
Kadib markii uu la kulmey xillibaanada Aqalka Sare iyo kan Hoosaba, madaxweyna Obama waxaa uu dhex qaadey barxada weyn ee gudaha isaga oo sawiro looga qaadayey qaybaheeda kala gedisan.
Mudanayaasha labada Aqal ee Dimuquraadiga ayaa sheegay in uu madaxweynuhu ku dhiirigaliyey in ay wadaan dadaalka ay ugu jiraan difaaca sharciga caafimaadka, hadii ay dhacdo oo sharcigaas la tirtirana ay masuuliyada dhibaatada kasoo gaarta dadka Mareykanka ee caymis la-aanta caafimaadka ku dhacdey ay saaraan xubnaha xisbigga Jamhuuriga.
Madaxweyne ku xigeenka la doortey ee Mike Pence ayaa isuguna shaley tagey isla daarta Capital Hill, isaga oo dhankiisana la kulmay xubnaha Jamhuuriga ee labada Aqal kalana hadley qorshaha dowlada cusub. Mike Pence waxaa uu xaqiijiyey in ka noqoshada sharciga caafimaadka ee Obama Care uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan dowlada Donald Trump.
Labadan kulan ayaa hoosta ka xariiqaya gulfka kasoo fool leh Aqalada Sare iyo Hoose ee Mareykanka, kadib marka ay xilka la kala wareegaan labada madaxweyne ee Barak Obama oo sii baxaya iyo Donald Trump oo xilka kala wareegaya 20-ka bishan.
Madaxweynaha la doortey ee Donald Trump ayaa horey ugu sheegay Obama Care, barnaamij micnodaran islamarkaasna uu diyaar u yahay in uu tirtiro.
Hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno booqashada Barak Obama iyo Mike Pence ee ay kula kala kulmeen mudanayaasha ay isku xisbiyada yihiin, ayaanu la xariirney Cabdikhafaar Wardheere oo ku taqasusey Horumarinta Caalamiga, islamarkaasna ka fallanqooda Amuuraha Mareykanka. Jaamac Buulle Jaamac ayaa weydiiyey socdaalka madaxdan ee Capital Hill.
Obama Capital Hill